Shiinaha warshad gelatin warshad iyo soosaarayaasha | Yaasiin
Waa maxay gelatin farsamo / xabagta la qariyo?
Warshadaha Teknolojiyada Gelatin waa borotiin laga soo saaray hydrolysis-ka kolajka oo ah borotiin ka kooban hargaha xoolaha, unugyada kolajka. Waa granule huruud khafiif ah, mesh ganaax granular mesh ah oo fudud oo lagu milmi karo biyaha. Alaabada ceeriin ee loo isticmaalo wax soo saarka waxaa laga soo qaatay xoolaha ama maqaarka. Gelatin-ka warshadaha waxaa badanaa loo isticmaalaa sameynta kubbadaha ranjiga, calafka, warqad tayo leh oo wax lagu nadiifiyo oo faashad ah, maro hufan, xabagta madow, xirxirida cinjirka, kaarka dhejiska gacmaha, alaabta guriga ka samaysan alwaax, calaamadda saxanka xogta, iftiinka maqaarka, midabeyn kara, xirxiran kara iyo xoqid. dareeraha, samaynta jel qaabaynta. Naftiisu waa mid aad muhiim u ah, xitaa waxay u dhaqantaa halbeegga muhiimka ah.
Gelatin Fasalka Warshadaha
Xoog Jelly Bloom 50-250Bloom
Nafwaayay (6.67% 60 ° C） mpa.s 2.5-5.5
Dambaska % ≤2.5
Maskax Culus mg / kg ≤50
Shaxda qulqulka ee warshadaha Gelatin
• GELATINKA WARSHADA waa jaalle khafiif ah, bunni ah ama bunni madow ah, kaas oo dhaafi kara shaandhada heerka 4mm aperture.
• Waa wax tarjumid ah, jilicsan (markay qallalan tahay), ku dhowaad walax adag oo aan dhadhan lahayn, oo laga soosaaray kolajka ku dhex jira xayawaanka ”maqaarka iyo lafaha.
• Waa shey kiimiko muhiim ah oo ceyriin ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa inuu yahay wakiil jilicsan.
• Marka loo eego tirakoobyada aan dhammeystirnayn, warshadaha gelatin warshadaha kala duwan oo ay ugu wacan tahay waxqabadkeeda, in ka badan 40 warshadood, in ka badan 1000 nooc oo alaab ah ayaa la adeegsadaa.
• Waxaa si ballaadhan loogu isticmaalaa xarkaha, xabagta jelly, dheelitirka, kubbadda ranjiga, dareeraha dahaadha, ranjiyeynta, warqadda ciida, is qurxinta, xajinta qoryaha, xajinta buugga, dial iyo wakiilka shaashadda xariirta, iwm.
Gelatin waxaa loo isticmaalaa ku dhowaad adduun ahaan sidii dhagtii loogu talagalay isku-dhafka isku-dhafan ee kiimikooyinka loo isticmaalo sameynta madaxa ciyaarta. Waxqabadka dusha sare ee gelatin waa muhiim tan iyo astaamaha xumbo ee madaxa ciyaarta wuxuu saameyn ku yeelanayaa waxqabadka ciyaarta dabka
Gelatin waxaa loo isticmaalaa cabbirka dusha sare iyo waraaqaha dahaadhka. Ama keligiis ama qalab kale oo dhejis ah ayaa loo isticmaalay, dahaadhka gelatin wuxuu abuuraa dusha sare iyada oo la buuxiyo cilladaha dusha sare ee yar yar taas oo markaa hubinaysa soo saarista daabacaadda. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah boodhadh, kaararka lagu ciyaaro, gidaarada, iyo bogagga joornaalka dhalaalaya.
Gelatin waxaa loo isticmaalaa sidii iskuxiraha udhaxeeya walaxda warqada iyo walxaha haraaga ah ee warqada ciida. Inta lagu gudajiro soosaarka warqada taageerida waxaa marka hore lagu dahaadhaa xal gelatin urursan ka dibna lagu booriyaa xoqid adag oo ah cabirka walxaha loo baahan yahay. Giraangiraha xoqan, saxannada iyo suumanka ayaa si isku mid ah loo diyaariyey. Foornada qalajinta iyo daaweynta iskutallaabtu waxay dhammaystireysaa hawsha.
Tobannaankii sano ee la soo dhaafay xabagta gelatin-ku-saleysan ayaa si tartiib tartiib ah loogu beddelay noocyo kala duwan oo synthetics ah. Dhawaan, si kastaba ha noqotee, biodegradability dabiiciga ah ee xabagta gelatin ayaa la xaqiijinayaa. Maanta, gelatin waa xarkaha xulashada buuga taleefanka lagu xidho iyo kartoonada jiingado.
25kgs / jawaan, hal bac oo gudaha ah, bacda la duubay / kraft dibadda.
1) Iyada oo santuuqa: 12 metrik ton / 20 feet feet, 24 metrik tons / 40 feet feet
2) Sariir la'aan:
mesh 8-15, weelka 17 metrik ton / 20 fuudh weel, 24 metrik ton / 40 feet weel
In ka badan 20 mesh, 20 metrik ton / 20 feet feet, 24 metric tons / 40 feet weel
Kaydinta bakhaarka: Si wanaagsan loo xakameeyo huurka yar ee ku dhaca 45% -65%, heerkulka 10-20 within
Ku shub weel: Ku hay weel si adag u xiran, kuna kaydso meel qabow, qalalan, hawo leh.